We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒီပဲယင်း ဖြစ်ရပ်မှန်
၂၀၀၃ ခုနစ် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းမှာ ဒေါ်စုကို သတ်ဖြတ်ဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် နဲ့ အဖွဲ့ က ဒေါ်စုကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လုို့ သိရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက
ဘယ်လို အမိန့် ပေးညွန့် ကြားခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတွေက အကောင်ထည်ဖေါ်ခဲ့တယ်။ သေဆုံး
သူတွေကို အစုအလိုက်အပြုံလိုက်ဘယ်မှာမြှုပ်နှံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ထောက်
လှမ်းရေးအဖွဲ့ က အသေးစိတ်သိတယ်။ မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်လို့ အမည်မဖေါ်လိုတဲ့
ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဝင်တဦး က ဆိုပါတယ်။ တချိန်မှာထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်လို့ လဲ သူကဆိုပါတယ်။
ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ထောက်လှမ်းရေးတချို့ ကို ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ အဖွဲ့ က ပြင်းပြင်းထန် ထန် အရေးယူခံခဲ့ရတယ်။
ဒီပဲယင်းအရေးခင်းကြောင့်အပြစ်မဲ့ သူ ၁၀၀ ကျော် ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်သတ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒေါ်စုကတော့ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
Its not the right time for Daw Su to say to startatrial. She will do it in future. She need to takeaposition before she startatrial???